Dabaakhyo Oo Head kariya Job Description / Xisaabtanka Template Oo Doorarka - JobDescriptionSample.org
Waajibaadka Shaqaale Lacageed Iyo Mas'uuliyadda
Home / Uncategorized / Dabaakhyo Oo Head kariya Job Description / Xisaabtanka Template Oo Doorarka
Yacquub June 28, 2016 Uncategorized Leave a comment 3,713 Views
Ardayda fasalka Oo Sorters, Beeraha Products Job Description / Meelaynta Oo Sample Duty
Medical Transcriptionists Job Description / Functions Oo Sample Xisaabtanka
Shoe Oo Leather Shaqaalaha Oo Repairers Job Description / Doorarka Oo Sample Xisaabtanka
Direct iyo ka qaybgali kara diyaarinta, dhalatada, iyo diyaarinta of doolshe kalluunka, hilibka, khudaar, saladh, ama cunto dheeraad ah. Laga yaabaa in aad u diyaariso iyo waxyaabaha doorashada kharashka, iibsadaan alaabta, oo ay u ilaaliyaan macluumaadka iyo xisaabaadka.
Skills Ayuub u Baahan
Imtixaan alaabta cuntada diyaarsan ama cayriin’ fasalka si loo hubiyo in shuruudaha waxaa lagu gaaraa.
La soco joogtada fayadhowrka si loo hubiyo in shaqaalaha ay raacaan laga filayo iyo sharciyada.
Hubi tayada iyo tirada alaabta helay.
Qoraya ama soo iibsadaan cuntada ama waxyaabaha kala duwan ee loo baahan yahay si dhab ah si loo hubiyo habka in ay ahayd wax ku ool ah.
Ilaali ama abaabuli joogtada ah shaqaalaha ama kariya ka hawlgala diyaarinta cuntada.
Shaqo gobollada si ay u gaar ah, qalabka, ama baadho sahay waafaqsan shuruudaha la xaqiijiyay.
Go'aanso sida cuntooyinka waa in loo soo bandhigay iyo dhalin muuqaalada cuntada in ay yihiin madaxtooyada.
Show kariya ama shaqaalaha in ay yihiin dheeraad ah ee isku diyaarinaya, karinta ama tusidda cunto.
Xisaabi xaddi iyo kharashka lagama maarmaanka ah waxay bixisaa, sida tusaale ahaan cuntada iyo waxyaabaha.
La shaqeeyaan shaqaalaha in ay yihiin kala duwan iyada oo la tixgelinayo xubno sida xataa lacagta badan tahay ee macaamiisha ama xilli doorasho ee qaybaha si ay u qorsheeyaan oo ay u bartaan cuntada ama doorashada.
Imtixaan suxuunta in uu soo dhaweeyo qiimaha ay u bedeley walxaha, badasho cunto, shaqo, iyo kharashka kharashka.
Diyaarinta iyo ka dhigi cuntada ee dhammaan noocyada, suurto gal ah in ka badan aasaas soo noqnoqda ama ku saabsan martida gaar ah ama sifooyinka.
Go'aanso ajendayaasha saarka iyo caddaymaha shaqaalaha loo baahan yahay si loo hubiyo in sahayda caadiga ah ee adeegyada.
Hel oo soo kiraystaan ​​shaqaalaha, sida cuntada kariya, iyo shaqaalaha kale oo guriga.
La kulan macaamiisha si ay u tagaan in ka badan bedeley xaaladaha jira oo gaar ah, sida tusaale ahaan aroosyada, xisbiyada, ama diyaafadaha.
Muuji dhaqanka karinta cusub ama wax soo saarka shaqaalaha.
La hadal kamay helin dakhliga si ay ugala hadlaan kharashka ama alaabta iibka.
rajeenayo in Request ama iibsada marsho.
Report abuurka ama macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee la siiyo.
Diyaari, hoose, ama kormeero udiyaarin cunto ama hawlaha cunto karinta dhowr jikada ama lagu cunteeyo ee aasaaska ah sida tusaale ahaan silsilad Maqaaxi ah, isbitaalka, ama albeergo.
Co-duwo qorshaynta ama helitaanka hababka cuntada oo dhan ganacsi oo ay ku jiraan kooxaha gudahood, albeerkooyinka, ama silsilado cafe.
Shaqo Waxqabadka Qualification
Akhrinta fahamka oge abuuray content iyo khadadka in files shaqo la xiriirta.
Dhagaysi-To waxa kale-oo qof ayaa leh la siiyo fiiro buuxa Active, waqti in la aqoonsado dhibcood ka hesho la-macmalay, weeydiin weydiimo sida saxda ah, halkii ay ku cabirayaan at jeer khalad.
Publishing-hadalka si fiican u qoran, ma aha sida aan habboonayn ee shuruudaha daawadayaasha ah.
Ka hadalka-ka hadlayay dadka kale u gudbiyo xaqiiqada effortlessly.
Xisaabta-Isticmaalka xisaabta si uu u xaliyo arimaha.
Hababka Technology-Dalbashada iyo tilmaamaha sayniska si ay u xaliyaan dhibaatooyinka.
Fikirka la sababaynta muhiim-Kafaa'iidaysiga iyo sababaha loo aqoonsado darrada iyo xirfadaha hababka, Natiijada ama jawaabaha bedel inay dhibaatooyin.
faa'iidooyinka Learning-Understanding warbixin cusub firfircoon ee ku saabsan problemsolving socda iyo hadda iyo go'aan-qaadasho labada.
Barashada Qaababka-qaadaaya oo isticmaala xeelado coachingPEReducational iyo nidaamka ku haboon tahay xaaladda qaaska waxbarista ama marka hanashada arrimaha jira cusub.
Monitoring-OverseeingOREvaluating waxqabadka baxo uuna ka mid ah, akhyaarey in ay yihiin kala duwan, ama shirkadaha qaado tallaabo lagu saxayo ama in ay soo saaraan uqaadineed.
Social Perceptiveness-ka foojignaatid jawaabaha othersA halka ay sameeyaan sababta ay fal oo ogaa.
falalka Coordination-Waxkabeddelka ee la xiriirta hawlaha othersI.
Salesmanship-oolka ah kuwa kale si ay u badalaan maskaxda ama ay falsayeen.
Gorgortanka-Gudbinta dadka kale si wadajir ah oo isku dayaya in ay heshiiyaan kala duwanyahay,.
Teaching-aad bartid dadka kale sida kaliya inay u dhaqaaqdo.
Orientation-ahaantii Company doonaya xeeladaha si loo caawiyo dadka waawayn.
Advanced Problemsolving-Aqoonsiga dhibaatooyin sir ah iyo dib u eegidda macluumaadka ku haboon baaro iyo si ay u horumariyaan fursadaha iyo hirgelinta xal.
baahida iyo caddaymaha item Ganacsi Qiimeynta-baarista si ay u sameeyaan qaabka a.
Design-Technology Technology si ay ugu adeegaan macaamiisha iyo simaya qalab ama soo saaridda damacyada.
Gear Selection-Go'aansiga nooca qalab iyo qalabka lahaa baahan yahay in la sameeyo shaqo.
mashiinada xiridda-xiridda, qalabka, fiilooyin, ama barnaamijyo si loo daboolo caddaymaha.
baakadaha Barnaamij-Qorista computer ku saabsan dhowr ujeedo.
Hawlgallada calls Monitoring-Daawashada, cabirrada, ama calaamadaha kale si loo hubiyo in ay jirto qalab ah fulinta ku habboon.
Operation iyo taabta-Xakamaynta hawlgallada aaladaha ama qalabka.
Qalabka Dayactirka-fulinta daryeelka in uu yahay joogtada ah ee marsho iyo go'aaminta marka.
Dhib-Aqoonsiga sababaha kala carar hawlgalka iyo doorashada sida ay u sii wadi ku saabsan this.
barnaamijyada ama qalabka loo adeegsado hababka in loo baahan yahay in la diyaariyo-qamaar.
baaritaanada iyo jeegaga waxyaabaha Quality Control Qiimeynta-Buuxinta, adeegyada, ama hawlaha oo lagu qiyaasi hufnaan ama tayo leh.
Wisdom oo Go'aan faa'iidooyinka Making-la tixgaliyo oo isbarbar dhiga sicirka tallaabooyin in badan tahay in la doorto mid ka mid ah ku haboon.
Systems Falanqaynta-Go'aansiga sida hagaajin in jawiga, hawlaha, iyo xaalado saamayn ku yeelan karta saamaynta iyo waxa sort of farsamo qabtaan waa in.
tallaabooyin ama calaamadaha waxqabadka iyo sidoo kale marka loo eego dhulka la dhigin ee xaq nidaamka ama hawlaha loo baahan yahay si loo wanaajiyo waxtarka Systems Qiimeynta-Aqoonsiga.
Timemanagement-qabashada muddada shakhsiyeed iyo sidoo kale kuwa kale’ Muddada ka mid ah.
Management of Savings-Go'aaminta sida ay lacagtaadu ku socoto in la qaatay si ay u bartaan shaqo oo dhamaystiran, iyo xisaabaadka ku saabsan kharashyada kuwan.
Hawlgalka of Product Means-Discovering iyo gaaridda isticmaalka saxda ah ee goobaha marsho, iyo ilaha wax soo saarka lahaa baahan yahay in la sameeyo shaqo cayiman.
Kormeerka shaqaalaha Resources-dhiirrigelin, dhismaha, iyo shakhsiyaad tilmaamaya sida ay ku shaqeeyaan, la aqoonsado dadka waawayn top for shaqada.
Shuruudaha Waxbarashada Qualification aqoonta
Inta Affiliate ee (ama dheeraad ah lacagta LABA-sanno)
Degree Senior High School (ama GED ama Senior High School Certificate isu-)
In ka badan 4 sano, intii lix sannadood oo ay ka mid yihiin,
Task Authority Skills Qualification
Rabitaan – %
Positioning Cultural – %
runsheegnimada – %
Wacyi of Qoto – %
xoog – %
war abuurashadoodii – %
Adoo ka fakaraya Analytical – %
Ku saabsan Yacquub
Hore Science Social Research Job Description Sample
Next Waajibaadka Shaqaale Lacageed Iyo Mas'uuliyadda
sameeyayaal model, Wood Job Description / Doorarka Oo Sample Mas'uuliyadda
Urursada kala duwan size-full iyo qoriga lagu daydo sax ah ee alaabta. Waxaa ka mid ah shaqaalaha guriga dushiisa iyo jiito alwaax …
Nagala soco on Facebook